श्री स्वस्थानीको व्रत बस्नाले के फल मिल्छ ?
आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत शुरु भएको छ । स्कन्द पुराणको हिमालय खण्डमा यसको महिमाबारे वर्णन गरिएको छ । आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायणपछिको समय
धार्मिक तपोभूमि नेपालमा हिन्दु महिलाले मनाउने एक महिने श्रीस्वस्थानी ब्रत आज शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदैछ ।आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीले एक महिनासम्म श्रीस्वस्थानीको ब्रत बस्ने
शुक्रबारबाट स्वस्थानी व्रतकथा, यो वर्ष अत्याधिक शुभ रहने
काठमाडौं । यस वर्षको स्वस्थानि व्रत पुष २५ गते सुरु हुदै छ । व्रत लिनेहरुका लागि पनि पुष २४ गतेबाट अस्त भएका देब गुरु बृहस्पति उदय भएकाले पनि व्रत आरम्भ
धार्मिक तपोभूमि नेपालमा हिन्दु महिलाले मनाउने एक महिने ब्रत श्री स्वस्थानी शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदैछ ।आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीले एक महिनासम्म श्रीस्वस्थानीको ब्रत बस्ने
पीएचडी गर्ने अमेरिकी डाक्टर भन्छिन-श्रीस्वस्थानी दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत कथा हो!
वानोद वान्थाईन र केरोन वान्थाईनका सुपुत्री अमेरिका निवासी जेसिका वान्थाईन विरकेन्होल्ज अमेरिकाकै यूनिभर्सिटी अफ ईलिनोयसका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलो पटक साँखुमा सन् १९९९ मा आउनुभएको थियो जत्तिखेर उहाँ
कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सवैभन्दा पहिले भगवान गणेको पूजा गरिन्छ । मंगलाचरणको शुरुवात नै श्री गणेशाय नमः बाट शुरु हुन्छ । भगवान गणेशको पूजा गर्नाले सुख शान्ति र समृद्धि
नेपालमा फेरि घुस्यो यस्तो वायुप्रणाली, उच्च हिउँ र पानी पार्ने विज्ञको चेतवानी
काठमाडौ । नेपालमा फेरी अर्को वायुप्रणाली घुसिरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । यसले फेरी नेपालमा उच्च हिउँ र पानी पर्ने विज्ञहरुको चेतवानी छ । जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा विकसित पश्चिमी वायुका कारण पानी
जाडो याममा औंला सुन्निने, रातो हुने, चिलाउने र घाउ नै हुने समस्या धेरैलाई देखिन्छ । यस्तो समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा पर्नियो (Pernio) वा चिलब्लेन (Chilblains) भनिन्छ । विशेष गरेर महिलाहरुमा यो
मोरङ- स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौ,न अनुभव गर्न चाहने देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो अनौठो यौ,निक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने
हिजो नाकाबन्दीको बिरोध गर्ने केपी ओलीले नेपालको सिमा मिच्दा सम्म चुक्क बोलेनन्!नेपालको सिमाना यसरी बेचे!
पछिल्लो समय नेपाली सिमाना भारतले आफ्नो कब्जामा बनाईरहेको बेलामा विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले भने फरक बिचार प्रस्तुत गरेका छन।आज भन्दा ६० बर्ष अगाडीनै नेपालको सिमाना लिपू लेक र कालापानी भारतले आफ्नो